စွဲ - လျော့နည်းသောဆုလာဘ်အာရုံခံမှုနှင့်မျှော်လင့်ထားမှုတိုးလာခြင်း ဦး နှောက်၏ထိန်းချုပ်မှုတိုက်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ကြံစည်ခြင်း (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်သည်
မှတ်ချက်များ - မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးခေါင်းဆောင် Nora Volkow နှင့်သူမ၏အဖွဲ့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ဤသုံးသပ်ချက်သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်ပါဝင်သောအဓိက neurobiological ကမောက်ကမဖြစ်မှု ၃ ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်သူတို့ဟာ က) Desensitization: ကြောင့် dopamine အချက်ပြတစ်ဦးကျဆင်းရန်ထုံပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှု; ခ) အသိ: စွဲတွေကို, အစပျိုးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုမှတိုးမြှင့် dopamine တုံ့ပြန်မှု; နှင့် ဂ) Hypofrontality: frontal cortex ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြောင့်, Self- ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်အားနည်း။ ဤကဲ့သို့သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကို American Society of Addiction Medicine (ASAM) မှ ၄ င်းတို့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် စွဲလမ်းအသစ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ် သြဂုတ်လ 2011 အတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Tomasi: D, Telang က F, Baler R. Bioessays ။ 2010 စက်တင်ဘာ; 32 (9): 748-55 ။
အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အင်စတီကျု, NIH, Bethesda, MD 20892, USA ။
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ - စွဲချက် - ဦး နှောက်၏ထိန်းချုပ်မှုတိုက်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးရန်မျှော်လင့်ချက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ခံစားချက်တိုးပွားလာခြင်း။
(က) ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ sensitivity ကိုယုတ်လျော့,
(ခ) conditional မူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှမျှော်လင့်ချက်များ, စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်မှတျဉာဏျဆားကစ်၏တိုးမြှင် sensitivity ကို,
(ဂ) နှင့်အားနည်းသောထိန်းချုပ်မှု circuit ကို။
အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူဖြစ်သော်လည်းကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အကြီးအကျယ်တစ်ဦးမိမိဆန္ဒအလျောက်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်, ဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနောက်ဆုံးမှာအလိုအလျောက် compulsive အပြုအမူသို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလှည့်အခမဲ့အလိုတော်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံဆားကစ်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ (dopamine, အချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားအပါအဝင်) အာရုံခံအကြား neurotransmitter အချက်ပြမှုများ-ဘေးဖယ်ပူးတွဲမှစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏စွမ်းရည်ကိုတစ်ဦးစွဲလမ်းကြောင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာစိတ်ပျက်ဖို့စတင်ရသောကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံဆားကစ်၏ function ကိုပြုပြင်မှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုပေါ်မှာဤစွဲလမ်းရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သော compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်ရလဒ်များသောလှုံ့ဆျောမှု / drive ကိုဆားကစ်၏ထိန်းအကွပ်မရှိသော hyperactivation မှု။
keywords: စွဲလမ်း, ဦးနှောက်ရောဂါ, dopamine, ဆုလာဘ် circuit ကို
neuroscience သုတေသန၏နောက်ဆုံး 25 နှစ်ပေါင်းလိုပဲစွဲနေတဲ့အဓိကကျသည့်လူထုသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအခြားရောဂါများမှဘုံဖြစ်ကြောင်းရှိသူများအဖြစ်စွဲတစ်ဦးချင်းစီမှဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှု၏တူညီသောစံချိန်စံညွှန်းများလေးစားလိုက်နာများအတွက်အစွမ်းထက်အငြင်းအခုံများကိုဦးနှောက်ရောဂါကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ ဆီးချိုရောဂါ။ အမှန်စင်စစ်စွဲအပေါ်သုတေသနပြုဖြစ်ရပ်များနှင့်တစ်ဦးစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာများ၏ဇွဲအလွဲသုံးစားမှုထံမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုကြာရှည် sequelae ၏ sequence ကိုချွတ်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု key ကိုမော်လီကျူးများနှင့်ဦးနှောက်ဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားနှင့်နောက်ဆုံးမှာစိတ်ခံစားမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအခြေခံကြောင်းပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်ဖြစ်စဉ်များနှောင့်အယှက်နိုငျပုံကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့စွဲဦးနှောက်ထဲမှာကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုတိုးချဲ့သံသရာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းသိရှိခဲ့ပွီ။ အဆိုပါချို့ယွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ်များ evolutionarily ပိုပြီးစရိုက်ဒေသများရှိစတင်ခဲ့သည်, ပြီးတော့ပိုမိုရှုပ်ထွေးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်အခြားဒေသများသို့အပေါ်လှုံ့ဆော်ပေး။ ထို့ကြောင့်ဆုချဖို့အပြင်, စွဲတစ်ဦးချင်းစီ (မှတ်ဉာဏ်, အေးစက်, လေ့) သင်ယူခြင်းအတွက်ပြင်းထန်ပြတ်တောက်တွေ့ကြုံခံစားနိုငျသညျ, အလုပ်အမှုဆောင် function ကို (ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တားစီး, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေး), သိမြင်အသိအမြင် (interoception) နှင့်ပင်စိတ်ခံစားမှု (စိတ်ဓါတ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို) လုပ်ငန်းဆောင်တာ။
positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကိုအသုံးပြုကြောင်းဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုထံမှအကြီးအကျယ်ဆွဲကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ထိခိုက်, ပြီးတော့တစ်ဦးဆိုနိုင်ပါတယ်မော်ဒယ်ကိုတင်ပြကြသည်သော့ချက်ဦးနှောက်ဆားကစ်မိတ်ဆက်ပေး, စွဲလမ်း၏အသားတင်ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာအဆိုအရအရာမှ ဤအ circuits များနှင့်အကြား imbalanced သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ ဤအတဖြည်းဖြည်းသပ္ပါယ် (neuroplastic) ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်၏, သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောဇီဝနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားနည်းချက်အချက်များတစ်နှံ့နှံ့စပ်စပ်နားလည်မှု, စွဲတိုက်ဖျက်ရေးကိုပိုမိုထိရောက်သောကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုချဉ်းကပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်။
အမြင့်, ဒါပေမယ့်အကျဉ်း, dopamine ၏ပြီးတော့ Activision နေတာစွဲလမ်းများအတွက်လိုအပ်သည်
စွဲလမ်းမှုသည် ဦး ဆုံး ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်၏ရောဂါဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုထပ်ဆင့်လွှင့်ရန် neurotransmitter dopamine (DA) ကို၎င်း၏အဓိကငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဦး နှောက် DA သည်ဆားငန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။1, 2] ၎င်း၏ထိန်းညှိနိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆုလာဘ်၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်သော [3, 4], [မျှော်လင့်ထားဆုချ5], လှုံ့ဆျောမှု, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အပျော်အပါး၏ခံစားချက်များကို။ ဦး နှောက်၏ ventral striatum တွင် DA ကိုယာယီထုတ်လွှတ်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များတွင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းဆုကျေးဇူး၏ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ DA တိုးမှုသည်အတွေ့အကြုံများသော“ မြင့်မားခြင်း” ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်နေပုံရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အချက်များကိုတုန့်ပြန်သောအနေဖြင့် DA သည်ဤချွန်ထက်သော၊ ယာယီ၊ တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ DA ကိုထပ်ခါတလဲလဲထုတ်လွှတ်သောအခါမှသာလျှင်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်, ရှိသမျှစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ [အကျိုးကို (limbic) စနစ်၏အဓိကဒေသတွင်း၌ extracellular DA အတွက်ပုံကြီးချဲ့ပေမယ့်ယာယီတိုးထွက်လာပါတယ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်6, 7] အထူးသသည်နျူကလိယ accumbens (Nac) အတွက် ventral striatum တွင်တည်ရှိသည်။ ထိုသို့သော DA တူ surges, အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အလွန်သဘာဝကျကျပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှု (များသောအားဖြင့်သဘာဝကစစ်ကူသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ကဖြစ်ပေါ်သည့်ဇီဝကမ္မတိုးကျော်ဖြတ်။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET), ကို အသုံးပြု. လူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါ (DA တိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်းပြသကြဥပမာ။ စိတ်ကြွဆေး (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A), [8, 9] နီကိုတင်း  နှင့်အရက် ) ကို ventral striatum အတွင်းမူးယစ်နေစဉ်အတွင်း) Euphoria ပီတိ (သို့မဟုတ်မြင့်မားသော၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုဆက်စပ်နေကြသည် [12, 13, 14] ။ ပေလေ့လာမှုများနိုးလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကတည်းကဒါဟာမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှင့် DA အဆင့်ဆင့်အတွက်ဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကို၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများအကြားဆက်ဆံရေးကြံစည်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အများစုမှာလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကအောက်ပါအကြီးမြတ်ဆုံး DA တိုးပြသသောသူတို့အား [စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, အရက်, methylphenidate (MPH)] သည်လည်း (အမွငျ့ဆုံးသောပြင်းထန်သောသို့မဟုတ် Euphoria ပီတိသတင်းပို့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြသင်္ဘောသဖန်း။ 1B).
အဆိုပါ striatum အတွက်လှုံ့ဆော်-မှီခို DA တိုး၏ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် "မြင့်မားတဲ့။ " A: [၏ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ် (DV) ပုံရိပ်များ11ကို C] အခြေခံမှာဘာသာရပ်များတဦးအဘို့အ raclopride နှင့် 0.025 နှင့် 0.1 ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် / ကီလိုဂရမ်ဃ MG ...
တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ (ကမူးယစ်ဆေးထဲသို့ဝင်ရသောနှင့်အတူအမြန်နှုန်းပေါ်မှာပြုမူကြောင်းသရုပ်ပြနှင့်ဦးနှောက်အရွက်ခဲ့ကြဆိုလိုသည်မှာ ယင်း၏ pharmacokinetic ပရိုဖိုင်းကို) က၎င်း၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအဆုံးအဖြတ်အတွက်အခြေခံကျသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးသွေးကြောသွင်းအခါအမှန်စင်စစ်အကြင်ဦးနှောက် pharmacokinetics ပေနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့ကြအလွဲသုံးစားမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမူးယစ် (ကိုကင်း, MPH, စိတ်ကြွဆေးနှင့်နီကိုတင်း), တူညီတဲ့ပရိုဖိုင်းထားပါတယ် ဆိုလိုသည်မှာ, ထိုလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို (10 မိအတွင်းရောက်ရှိနေကြပါတယ်သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) နှင့်ဒီအစာရှောင်ခြင်းလွှာမှ "မြင့်" နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ ဒီအသင်းအဖွဲ့အပေါ်အခြေခံပြီး, ကအောက်ပါအတိုင်းတစ်ခုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတတ်နိုင်သမျှဦးနှောက်ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုသေချာအောင်ကြောင်းဤအရပ်မှယင်း၏အားဖြည့်အလားအလာ၎င်း၏အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုအသေးအဖွဲတစ်ခုထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ကျနော်တို့ကိုကင်းကဲ့သို့ပြန်လည် presynaptic အာရုံခံဆဲလျ (သို့င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှေးအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် DA တိုးပွါးရာသည်, လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေး MPH နှင့်အတူတိကျစွာဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဒီဇိုင်းရေးဆွဲဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါ DA signal ကိုခြီးမှမျးသ, အရှင်,) DA ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်။ အမှန်မှာကျနော်တို့ [ကိုလည်း striatum အတွက် DA တိုးပွါးသော MPH ၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမကြာခဏနှုတ်အုပ်ချုပ် MPH euphorigenic ဖြစ်ပါသည်စဉ်တွေ့ရှိခဲ့15], ဒါပေမယ့် 6-ခေါက်နှေးကွေး pharmacokinetics မှ 12- အတူပုံမှန်အားအားဖြည့်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်မဟုတ် [16, 17] ။ ထို့ကြောင့်ပါးစပ် MPH ၏ကျရှုံးခြင်း - သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး  ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအဘို့ - မြင့်မားသောသွေးဆောင်ဖွယ်ရှိဦးနှောက်သို့၎င်းတို့၏နှေးကွေးလွှာမှ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်  ။ ထို့ကြောင့်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး DA အဆိုပါ ventral striatum အတွက်တိုးပွါးမှာမြန်နှုန်းဆုံးဖြတ်သည်သောဦးနှောက်, ဝင်သောအရာမှာနှုန်းနှင့်၎င်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတစ်ဦးနီးကပ်ဆက်စပ်မှု၏တည်ရှိမှုအဆိုတင်သွင်းဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည် [20, 21, 22] ။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာရုတ်တရက် DA ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ရှိပါတယ်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဒါဖြစ်သင့်သလဲ
A: များ၏ဖြန့်ဖြူး၏ Axial ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေ [11၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆ (မိနစ်) မှာက C] စိတ်ကြွဆေး။ B: များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အချိန်လှုပ်ရှားမှုကွေး [11ကို C] က "အဆင့်မြင့်" များအတွက်ယာယီသင်တန်းအတူ striatum အတွက်စိတ်ကြွဆေး ...
phasic သို့မဟုတ်လုပ်သူများ: အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်များ၏ပြင်းအားနှင့်ကြာချိန်ပေါ်အခြေခံပြီး, DA အချက်ပြနှစ်ခုအခြေခံပုံစံများကိုတစ်ဦးယူနိုင်ပါတယ်။ လုပ်သူများအချက်ပြပုံမှန်အားဖြင့်အနိမ့်လွှဲခွင်နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အချိန်သင်တန်းရှိပါတယ်သော်လည်း Phasic အချက်ပြမြင့်မားလွှဲခွင်နှင့်ရေတိုပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ကအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ကမူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင်) လှုံ့ဆော်မှုအားဖြည့်ဖို့ထိတွေ့မှုအတိုင်းလိုက်နာသောကနဦး neuroadaptations တဦးဖြစ်သည့် "အေးစက်တုံ့ပြန်မှု," သွေးဆောင်ရန်အဘို့အ phasic DA အချက်ပြလိုအပ်သောကြောင်းထွက်လှည့်ကြောင့်ဂုဏ်ထူးအရေးကြီးပါသည်။ အေးစက်နှင့်အတူ phasic အချက်ပြဆက်သွယ်သောကွဲပြားရှုထောင့်တစ်ခုမှာ D2R များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်နှင့်အချိုမှု n-methyl-d-aspartic အက်ဆစ် (NMDA) receptors  ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လုပ်သူများ DA အချက်ပြအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြားအလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်စဉ်များ၏မော်ဂျူအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အဆိုပါ phasic အမျိုးအစားထဲကနေအချက်ပြ၏ဤ mode ကိုခွဲခြားသော features တွေ၏အချို့ကြောင့်အများအားဖြင့်နိမ့်ဆှဖှေဲ့ DA receptors (DA D1 receptors) မှတဆင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများ, ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (ဤ receptors မှတစ်ဆင့်အချက်ပြလုပ်သူများ DA ပြောင်းလဲမှုများ) ၏ကြားမှမှာလည်း [နောက်ဆုံးမှာအေးစက်မှုသော neuroplastic အပြောင်းအလဲများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး25အချိုမှု receptors] NMDA ၏ပြုပြင်မွမ်းမံမှတဆင့်များနှင့်များနှင့် alpha-အမိုင်နို-3-ဟိုက်ဒ-5-methyl-4-isoxazone-propionate (AMPA) .
အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများ DA အတွက်ရုတ်တရက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တိုး phasic DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်တူတဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာများနာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုက၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်တိုင်က၎င်း၏မျှော်လင့်ထားနှင့်များပြားလှတွေကို (လူမျိုး, အမှုအရာနှင့်နေရာများ) တို့အားဤသို့သောအစွမ်းထက်သောအခြေအနေများတုံ့ပြန်မှုဖန်တီးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြကူညီပေးသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအစာရှောင်ခြင်း DA တိုးအပေါ်မူတည်ကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်လူတန်းစားဖွယ်ရှိစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် "လိုအပ်သော" ရှိနေစဉ်, သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတျပါ "လုံလောက်သော။ " ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ရန်အချိန်ယူ DA ဦးနှောက် function ကိုပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည် သူတို့ကတခြား neurotransmitter စနစ်များအတွက်အလယ်တန်း neuroadaptations ကနေရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖွံ့ဖြိုး (ဥပမာ အချိုမှု  နှင့်ဖြစ်ကောင်းလည်းγ-aminobutyiric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား)) နောက်ဆုံးမှာ, DA အားဖြင့် modulated အပိုဆောင်းဦးနှောက်ဆားကစ်ကိုထိခိုက်ကြောင်း။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်လာမည့်ကဏ္ဍများ၏အာရုံဖြစ်ကြ၏။
နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု dopamine receptors နှင့် dopamine ထုတ်လုပ်မှု downregulates: အဆိုပါ "အမြင့်ဆုံး" ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ပါတယ်
စွဲအမြစ်ကြာမတိုင်မီမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနာတာရှည်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရောဂါအကျိုးကိုစနစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းပေါ်, အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, predicated ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနောက်ဆုံးတွင် [လည်း DA အားဖြင့် modulated ဖြစ်ကြောင်းများစွာသောအခြားဆားကစ် (လှုံ့ဆျောမှု / drive ကို, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု / အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများနှင့်မှတ်ဥာဏ် / အေးစက်) တွင် neuroadaptations ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်27] ။ တသမတ်တည်းစွဲဘာသာရပ်များအစီရင်ခံခဲ့ကြသော neuro-အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တို့တွင် D2R (မြင့်သောဆှဖှေဲ့) receptors တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့် DA ဆဲလ်များကဖြန့်ချိ DA ပမာဏကိုအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချ [များမှာ28] (သဖန်းသီး။ 3) ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီလိုငွေပြမှုဟာ prefrontal cortex (PFC) ၏ဧရိယာများတွင်နိမ့်ဒေသဆိုင်ရာဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်လျော်သောအလုပ်အမှုဆောင်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်း (ဆိုလိုသည်မှာ anterior cingulate gyrus (CG) နှင့် orbitofrontal cortex (OFC)) (သင်္ဘောသဖန်း။ 4A) ။ ဤသည်လေ့လာရေး [ဒီ compulsive မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်အတူအချက်ပြ DA အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြတ်တောက်ချိတ်ဆက်သောယန္တယားများ၏တဦးတည်းဖြစ်အံ့သောငှါ postulate ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်29] ။ ထို့အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် hypodopaminergic အခြေအနေကစွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး ၏သဘာဝဆုလာဘ်များ (ဥပမာအစားအစာ၊ လိင်၊ စသည်တို့) နှင့်ဤလိုငွေပြမှုကိုယာယီနစ်နာစေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်လက်တည်တံ့နိုင်မှုကိုရှင်းပြသည်။30] ။ ဤအသိပညာ၏အရေးပါသောစောဒနာ [(striatal D2R အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် striatum နှင့် prefrontal ဒေသများတွင် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်) ဤလိုငွေပြမှုကိုဖြေရှင်းစွဲများ၏သက်ရောက်မှု ameliorate ဖို့လက်တွေ့မဟာဗျူဟာပူဇော်နိုင်ကြောင်း31] ။ အဆိုပါ hypodopaminergic ပြည်နယ်နောက်ပြန်ဆုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အလွဲသုံးစားမှု-related အပြုအမူတွေအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုမည်သည့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား? အဖြေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများ [D2R ၏ overproduction အတင်းအကျပ်အသုံးပြုပုံနက်ရှိုင်း cocaine- သို့မဟုတ်အရက်-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များ၏အကျိုးကိုစနစ်ကအတွင်းပိုင်းကျနော်တို့သိသိသာသာကိုကင်းများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုပြသ31] သို့မဟုတ်အရက်  အသီးသီး။ ထိုမှတပါး, ကြွက်များတွင်အဖြစ်လူ့စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်  D2R တစ်ဦးလျှော့ striatal အဆင့်အထိလည်း (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) Impulse နှင့်ဆက်စပ်နှင့်ကြွက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး compulsive ပုံစံများခန့်မှန်းထားသည်။
ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် striatum ရဲ့အဆင့်မှာ DA D2 receptors (D2R) ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်များ။ ပုံရိပ်တွေ [အတူရယူခဲ့ကြသည်11ကို C] raclopride ။ Volkow ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုပြင်ထားသော et al။ .
A: တစ်ထိန်းချုပ်ပြီးကိုကင်းအကြမ်းဖက်အတွက်ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်တိုင်းတာရန် fluorodeoxyglucose (FDG) နဲ့ရရှိသောပုံများ။ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်အခါကင်းအကြမ်းဖက်အတွက် orbitofrontal cortex (OFC) အတွက်လျှော့ချဇီဝြဖစ်သတိပြုပါ။ B: အကြားဆက်စပ်မှု ...
imaging လေ့လာမှုများလည်း (လူသားများ, စွဲဟာ ventral striatum နှင့် striatum ၏အခြားဒေသများ၌၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးမှတုံးပျြောမှေ့စတုံ့ပြန်မှုအတွက်တက်ကြွစွာနှင့် detoxified မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်, ထိုပြခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 5)  ။ ဤသည်ကစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှုဟာအကြိုး (နှင့်ဤအရပ်ပု dopaminergic) ကိုတစ်ဦးပိုမို sensitivity ကိုထင်ဟပ်တွေးဆခဲ့စဉ်ကတည်းကတစ်ဦးမျှော်လင့်မထားတဲ့တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုခုနှစ်, DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျော့နည်း (အကျိုးကို circuitry အတွင်းသော်လည်းကောင်းနှောင့်အယှက် neurophysiology ထင်ဟပ်နိုင်ဆိုလိုသည်မှာ တနည်းအဆိုပါ DA အဆိုပါ striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ကြောင်းအာရုံခံ) သို့မဟုတ်, prefrontal (အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု) သို့မဟုတ် amygdalar အားဖြင့်ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုနှောင့်အယှက်တုံ့ပြန်ချက်စည်းမျဉ်း (စိတ်ခံစားမှု) လမ်းကြောင်း (prefrontal-striatal, amygdalarstriatal glutamatergic လမ်းကြောင်း) မှာ။ အဆိုပါ striatum တစ်စင်ကြယ်သော dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကတည်းကနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေရဲ့အနှစ်သာရသောစရိုက်များများအတွက်အကောင့်ပျက်ကွက်, Impulse, မတရားသောနှင့်မူးယစ်ဆေးတွေကိုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် relapse လိုပဲက prefrontal ဒေသများ (သကဲ့သို့အလွန်ဖွယ်ရှိသည် သူတို့ရဲ့နှောင့်အယှက်ကို enable သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဤအမူအကျင့်စရိုက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလို့ကောင်းကောင်း amygdala ကဲ့သို့) လည်းဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
MPH ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့် detoxified အရက်သမားများတွင် (raclopride ၏တိကျသောစည်းနှောင်မှုသို့မဟုတ် Bmax / Kd ကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်း) တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အရက်သမားပြသ DA DA လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွားသည်။ Volkow ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ et al။ .
လျှော့ချ dopamine အဲဒီ receptor (DR2) အဆင့်ဆင့်ဟာ prefrontal cortex အားဖြင့် Impulse ၏ထိန်းချုပ်မှုအယှက်
ဒါဟာ [စွဲကဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျဒေသများတွင်တိကျတဲ့အလုပ်မဖြစ်မှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် compulsive မူးယစ်ဆေးယူပြီးအပြုအမူတွေကိုကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်းကိုတွေးဆထားသည်35] ။ ဒီအယူအဆကိုပံ့ပိုးသောသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုသိသိသာသာငွေပမာဏ D2R နှင့်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းကြောင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူစတင်ယခုရှိပါသည်။ ကြွက်များနှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း [အနိမ့် D2R နှင့် Impulse အကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသ36] နှင့် Impulse နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးအကြား  ။ ဒါပေမယ့်ကွန်နက်ရှင်ကဘာလဲ? ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအောက်ပိုင်း striatal D2R သိသိသာသာထိုကဲ့သို့သော inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပါဝင် OFC (salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့်အဘယ်သူ၏ပြတ်တောက် compulsive အပြုအမူတွေအတွက်ရလဒ်တွေကိုအတူပါဝင်) နှင့် CG အတွက် (အဖြစ် PFC ၏သော့ချက်ဒေသများတွင်နိမ့်ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်, နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည် နှင့်အမှားစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏ပြတ်တောက် Impulse အတွက်ရလဒ်တွေကို) (သင်္ဘောသဖန်း။ 4B) [38, 39] ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖျော်ဖြေလေ့လာမှု (24 ±3နှစ်အသက်အရွယ်± SD ကကိုဆိုလိုတာ) ရက်တစ်မိသားစုသမိုင်း, ဒါပေမယ့်သူကိုမိမိတို့ကိုယ်ကို alcoholics မဟုတ်နှင့်အတူရှိအတွက်, ငါတို့သည်လည်းတိုကျရိုကျဒေသများ (CG အတွက် striatal D2R နှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့အဝတ်မခြုံဘဲ , OFC နှင့် PFC dorsolateral) နှင့်လည်း interoception, Self-အသိအမြင်နှင့်မူးယစ်ဆေးတဏှာတွင်ပါဝင်ပတ်သက် anterior insula () ထဲမှာ  (သဖန်းသီး။ 6) ။ သူတို့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်အတွက်ကွဲပြားဘူးပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီတစ်ဦးချင်းစီ, အရက်၏အဘယ်သူမျှမကမိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူလိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုမြင့်မား striatal D2R ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် striatal D2R တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်အတူမပတျသကျဘူး။ ဤသည်မှာအရက်အဘို့အမြင့်မားသောမျိုးဗီဇအန္တရာယ်နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ပုံမှန် striatal D2R ထက်ပိုမိုမြင့်မား prefrontal ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်အရက်ဆန့်ကျင်သူတို့အားကာကွယ်ပေးသည်သော။ မှနျးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင် ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီဒေတာ striatum အတွက် D2R ၏မြင့်မားထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် Impulse စရိုက်များကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု, ဆိုလိုသည်မှာ, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဟန့်တားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းစိတ်ခံစားမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆားကစ်ကိုထိန်းညှိသည်။
DA D2 receptors (D2R) သိသိသာသာအရက်၏မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းရာဦးနှောက်၏ဧရိယာများ။ Volkow ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုပြင်ထားသော et al။ .
အလားတူပဲကျနော်တို့သူတို့ striatum အတွက် midbrain နှင့် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပစ်ခတ် DA ဆဲလ်ထိန်းညှိကတည်းက prefrontal ဒေသများတွင်လည်းစွဲဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိ striatal DA လွှတ်ပေးရေး (နှင့်အားဖြည့်) ၏လျှော့ချရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုတွေးဆ။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့အခြေခံသည့် PFC အတွက်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် detoxified အရက်သမားအတွက် MPH ၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် striatal DA အတွက်တိုးအကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်။ ယင်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, အရက်သမားငါတို့သည် prefrontal ဦးနှောက်ဒေသများအားဖြင့်အရက်သမားတွင်တွေ့မြင် striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်မှတ်သားလျှောက်လျော့နည်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမလျော်ကန်သောစည်းမျဉ်းများတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြု, အခြေခံ prefrontal ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့် striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အကြားပုံမှန်အသင်းအဖွဲ့ detect လုပ်ဖို့ပျက်ကွက် .
ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ PFC အတွက်လျှော့အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-စွဲဘာသာရပ်များ၌၎င်း, အခြေခံ PFC လှုပ်ရှားမှုနဲ့စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လက်ရှိမဟုတျကွောငျးထိန်းချုပ်မှုအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အကြား striatal D2R လျှော့ချပါပြီ။ ဤရွေ့ကားအသင်းအဖွဲ့များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Impulse နှင့် compulsive အပေါ် PFC ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများဖွယ်ရှိသည် DA ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ် PFC လမ်းကြောင်းနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအလုပ်မဖြစ်အတွက် neuroadaptations အကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှု evince ။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောယူဆရမှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုဆားကစ် ဆက်စပ်. အလိုတဏှာထွက်လာပါတယ်အတွက်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်တွေကို၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်နောက်ထပ်အမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်တွေအတွက်အကောင့်ရန်ပျက်ကွက်။
အေးစက်အမှတ်တရများနှင့်ကျပုံစံအပြုအမူတွေကိုယာဉ်မောင်းအဖြစ်ကို "အမြင့်ဆုံး" ကိုအစားထိုး
over-ဆွ DA ဆဲလ်များ၏ ventral striatum အတွက်နောက်ဆုံးမှာ (စသည်တို့ကိုဥပမာ, ပတ်ဝန်းကျင်, မူးယစ်ဆေးပြင်ဆင်နေ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်,) ကိုတိုက်တွန်းကျေနပ်၏လုပ်ရပ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကဖြစ်ရပ်များအကြားကဦးနှောက်ထဲမှာအသစ်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ခြင်းသစ်ချတင်သော , အစွမ်းထက်အပြုအမူဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်မူးယစ်ဆေး၏မျှသာမှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်စွဲတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အနှစ်သာရကသောထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်တကွ, striatum အတွက် DA ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်သည့် neurochemistry နောက်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုကိုပြောင်းလဲဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ဒါက [(ဤလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါယင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိ၏လေ့လာသင်ယူမျှော်လင့်အတွက်) မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးများ၏စွမ်းရည်ကိုရှင်းပြကူညီပေးသည်သောမူးယစ်ဆေးနဲ့ချိတ်ဆက် maladaptive မှတ်ဉာဏ်ခြေရာတွေ၏စုစည်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်41] အလွယ်တကူပစ်ခတ် DA ဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့။ ထိုအကြောင်းကြောင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏, ဤ DA တိုး [အကျိုးကို secure မှလိုအပ်သောလှုံ့ဆျောမှု drive ကိုဖြစ်ပေါ်42] ။ ကြွက်မူးယစ်ဆေး (အေးစက်) နဲ့တွဲသောကြားနေနှိုးဆွဖို့အကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ကြသောအခါအမှန်စင်စစ်, က DA တိုးထုတ်ယူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်နိုငျ  ။ သူတို့ပင် detoxification ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကာလပြီးနောက်ပြန်သွားကြသည်တစ်ခုစွဲလူတစ်ဦး၏မြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော conditional တုံ့ပြန်မှုပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းစနစ်မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမှလူသား၏ထိတွေ့မှုဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များမှာပြမယ့်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးတဏှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်တကွ, striatum အတွက် DA ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်သည့် neurochemistry နောက်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုကိုပြောင်းလဲဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ဒါက [(ဤလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါယင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိ၏လေ့လာသင်ယူမျှော်လင့်အတွက်) မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးများ၏စွမ်းရည်ကိုရှင်းပြကူညီပေးသည်သောမူးယစ်ဆေးနဲ့ချိတ်ဆက် maladaptive မှတ်ဉာဏ်ခြေရာတွေ၏စုစည်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်41] အလွယ်တကူပစ်ခတ် DA ဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့။ ထိုအကြောင်းကြောင့်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏, ဤ DA တိုး [အကျိုးကို secure မှလိုအပ်သောလှုံ့ဆျောမှု drive ကိုဖြစ်ပေါ်42] ။ ကြွက်မူးယစ်ဆေး (အေးစက်) နဲ့တွဲသောကြားနေနှိုးဆွဖို့အကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ကြသောအခါအမှန်စင်စစ်, က DA တိုးထုတ်ယူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်နိုငျ  ။ သူတို့ပင် detoxification ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကာလပြီးနောက်ပြန်သွားကြသည်တစ်ခုစွဲလူတစ်ဦး၏မြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော conditional တုံ့ပြန်မှုပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းစနစ်မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမှလူသား၏ထိတွေ့မှုဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များမှာပြမယ့်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးတဏှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ဤမေးခွန်းကိုတက်ကြွကင်းချိုးဖောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ပေအသုံးပြုခြင်းနှင့် [11ကို C] raclopride နှစ်ခုလွတ်လပ်သောလေ့လာမှုများ (ကိုကင်းဆေးလိပ်ဘာသာရပ်များ၏) တစ်ဦးကိုကင်း-တွေကိုဗီဒီယိုသော်လည်းမ (သဘာဝမြင်ကွင်းများ၏) တစ်ဦးကြားနေဗီဒီယိုထိတွေ့မှု (ကိုကင်းစွဲလူ့ဘာသာရပ်များအတွက် striatal DA တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသသဖန်းသီး။ 7) နှင့် DA တိုး [မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့44, 45] ။ အဆိုပါကင်း-တွေကိုဗီဒီယိုထိတွေ့မှုအားဖြင့်အစပျိုးအဆိုပါမြင့် DA တိုး, ပိုပြင်းထန်သောမူးယစ်ဆေးတဏှာ။ ထို့အပြင် DA တိုး၏ပြင်းအားကိုလည်းစွဲလမ်း၏လက်တွေ့ syndrome ရောဂါအခြေအနေများတုံ့ပြန်မှုများ၏ဆက်စပ်မှုမီးမောင်းထိုးပြ, စွဲပြင်းထန်မှုရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
တစ်ဦးက: [၏ပျမ်းမျှ DV ပုံရိပ်တွေ11တက်ကြွကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်ကို C] raclopride (n တစ်ဦးကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း = 17) (စမ်းသပ်ပြီးB) ကြားနေကဗီဒီယို (သဘာဝမြင်ကွင်းများ) နှင့်တစ်ဦးကြည့်ရှုနေစဉ် (C) ကိုကင်းတွေကို (ဘာသာရပ်များကိုကင်းများဝယ်ယူရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ) နဲ့ဗီဒီယိုက။ အတူပြုပြင်ထားသော ...
ဤ maladaptive အသင်းအဖွဲ့များ၏ယူဆရအစွမ်းသတ္တိ၏ကြားမှကျနော်တို့ကြောင်းကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်တဏှာတားစီးဖို့အချို့သောစွမ်းရည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အကြံပြုသစ်ကိုသက်သေအထောက်အထားမကြာသေးမီက၌စုဝေးကြပြီ, သို့သော်, အလေးပေးဖို့အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်, နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal စည်းမျဉ်းကိုခိုင်ခံ့စေဖို့မဟာဗျူဟာ [အလားအလာကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်စေခြင်းငှါ46].
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အရှိဆုံး pernicious features တွေ၏အချို့ပင် abstinence ၏နှစ်ကြာ reemerge နိုငျသောမူးယစ်ဆေးဝါးများယူလွှမ်းမိုးသောတဏှာနှင့်လူသိများတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏ကြားမှအတွက်တဏှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ကြိမ်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးတားစီးဖို့စွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏ပြင်းထန်စွာညှိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ [စွဲနေတဲ့မော်ဒယ်အဆိုပြုထားကြပါပြီ47] အဘယ်သူ၏ပေါင်းစပ် dys-functional ဖြစ်စေ output ကိုစွဲလမ်း၏ပုံစံအမူအကျင့် features တွေအများအပြားရှင်းပြနိုင်ပါတယ်လေးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောဆားကစ်၏ကွန်ယက်အဆိုပြုသဖြင့်ဤရောဂါ၏ multidimensional သဘောသဘာဝရှင်းပြသော: အအထူးသဖြင့်, ထို Basal ganglia အတွက်အများအပြားအရေးပါအပါအဝင် (က) ဆုလာဘ်, အဘယ်သူ၏ Nac အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာဆီက input ကိုလက်ခံရရှိနှင့် ventral pallidum (VP) မှသတင်းအချက်အလက်များထပ်ဆင့်လွှင် ventral striatum, (ခ) လှုံ့ဆျောမှု / drive ကို, အ OFC မှာတည်ရှိပါတယ်, subcallosal cortex, dorsal striatum နှင့်မော်တာ cortex; (ဂ) မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုတို့သည် amygdala နှင့် hippocampus တည်ရှိသော; နှင့် (ဃ) စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသည် dorsolateral prefrontal cortex မှာတည်ရှိပါတယ်, anterior CG နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex ။ ဤရွေ့ကားလေးဆားကစ် DA အာရုံခံကနေတိုက်ရိုက် innervations ခံယူဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်စီမံချက်များမှတဆင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် (အများအားဖြင့် glutamatergic) နဲ့ချိတ်ဆက်နေကြသည်။
အဆိုပါလေးယောက်အတူတူဒီမော်ဒယ်အလုပ်အတွက်ဆားကစ်နှင့်၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပြောင်းပေးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအသီးသီးအရေးပါသောအယူအဆနှင့်ဆက်စပ်နေသည်: saliency (ဆုလာဘ်), ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ် (လှုံ့ဆျောမှု / drive ကို), (မှတ်ဉာဏ်, အေးစက်), နှင့်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး (ထိန်းချုပ်မှု) အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်ဤဆားကစ်လည်း [(စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအပါအဝင်) စိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဆားကစ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်48] နှင့် (မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ခံစားချက်၏အသိအမြင်မှု) ကို interoception နှင့်အတူ  ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဖော်ပြထားလေးပါး-circuit ကိုကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပုံစံသာမန်တစ်ဦးချင်းယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်စရာအကြားရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်ဘယ်လောက်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားရွေးချယ်မှုအကျိုးကို, မှတ်ဉာဏ် / အေးစက်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်များကစနစ်တကျသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနေကြသည်နှင့်ဤအလှည့်၌ (စိတ်ဓါတ်များနှင့်သတိအသိပညာအခြေခံကြောင်းဆားကစ်များက modulated နေကြတယ်သင်္ဘောသဖန်း။ 8A).
ဆုလာဘ် (အနီ: အဆိုပါ ventral astriatum နှင့် VP ၏နျူကလိယ accumbens မှာတည်ရှိပါတယ်) စွဲအခြေခံလေးဆားကစ်၏ကွန်ယက်အဆိုပြုမော်ဒယ်; လှုံ့ဆျောမှု (အစိမ်းရောင်: OFC မှာတည်ရှိပါတယ်, subcallosal cortex, dorsal striatum နှင့်မော်တာ cortex); မှတ်ဉာဏ် (ကိုရွှေ: တည်ရှိသည် ...
တစ်နှိုးဆွဖို့တုံ့ပြန်မှုက၎င်း၏မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ဒင်္ saliency ကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ အလှည့်၌, ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထားသည့် ventral striatum သို့ထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (စကားစပ်တဲ့ function ကိုအဖြစ် saliency တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အရာ) ကို OFC ထံမှ glutamatergic စီမံချက်များနှင့် (အေးစက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်မှတ်ဉာဏ်စာမျက်နှာဖျန်ဖြေပေးသော) amygdala / hippocampus ကလွှမ်းမိုး။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏တန်ဖိုးသည်အခြားအခြားရွေးချယ်စရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ဆန့်ကျင် (နှိုင်းယှဉ်လျှင်) မာန်တင်း, ဒါပေမယ့်လည်း (စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအပါအဝင်) စိတ်ဓါတ်များနှင့် interoceptive အသိပညာအားဖြင့် modulated သောတစ်ဦးချင်းစီ၏အတွင်းပိုင်းလိုအပ်ချက်, တစ် function ကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲနေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာက amygdala ၏ prefrontal စည်းမျဉ်းလျော့ကျနေချိန်တွင်အထူးသဖြင့်, စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ [မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ saliency တန်ဖိုးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်50] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ကတည်းကစိတ်ဖိစီးမှုလက်တွေ့အခြေအနေများတွင်ဒါမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါး relapse ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီကရှင်းပြသည်တုံ့ပြန်မှုအလေးပေးဖို့မြှင့်တင်ရန်ာင်းဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါစိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းကရယူဖို့ drive ကို၏ activation သာ. ယခင်ကမှတ်မိအတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ပုံဖော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ saliency တန်ဖိုးပိုမိုအားကောင်း။ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်မဟုတ်) ကိုနှိုးဆွရယူဖို့ရန်သိမြင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှောင့်နှေးအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှိုင်းယှဉ်ချက်ချင်းအပြုသဘောအကြားချိန်ခွင်လျှာချိန်ဖြစ်သော PFC နှင့် CG ဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်လုပ်ငန်းများ၌, နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex (Broadmann ဧရိယာ 44) ကဖြစ်ပါတယ်, အရာပြုမူဖို့ prepotent တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ် .
ဒီ model ၏အဆိုအရ (အစွဲဘာသာရပ်အတွက်သင်္ဘောသဖန်း။ 8B), အအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်တွေကိုများ၏ saliency တန်ဖိုးကိုအဘယ်သူ၏ saliency သိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်သည်အခြား (သဘာဝ) ဆုလာဘ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာတိုးမြှင့်သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးရှာတိုးမြှင့လှုံ့ဆော်မှုကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်။ သို့သော်စူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုလည်း [စစ်ကူဖို့ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဆုလာဘ်တံခါးရဖို့အတွက်52] ကိုလည်းစွဲလူတစ်ဦးအတွက် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူများလျော့ကျလာတန်ဖိုးကိုရှင်းပြကူညီပေးသည်ရာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုးမြှင် saliency များအတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်တည်ရှိသောပုံမှန်လေ့နှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောအတွက်ရလဒ်တွေကို [ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ DA တုံ့ပြန်မှု (သည်းခံစိတ်) ၏လေ့မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်53].
ထိုမှတပါး, Conditions လှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ [ဆုလာဘ်တံခါးတိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်54]; အရှင်ကျနော်တို့အနေနဲ့စွဲလူတစ်ဦးအတွက်, Conditions တွေကိုနှင့်အတူတစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့နောက်ထပ်သဘာဝကဆုလာဘ်၎င်းတို့၏ယုတ်လျော့ sensitivity ကိုပိုမိုဆိုးရွားလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ အခြားအစစ်ကူအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိခြင်း၌, အေးစက်သင်ယူမှုဟာတစ်ဦးချင်းစီများအတွက်အဓိကစိတ်ခွန်အားနိုး drive ကို၏အဆင့်အထိမူးယစ်ဆေးဝါး၏လေးလည်း elevates ။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို (သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု) ကို ventral striatum နှင့်မူးယစ်ဆေးယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျအလုပ်မဖြစ်တဲ့ PFC အားဖြင့်ဆန့်ကျင်မရနိုငျသော dorsal striatum အတွက် Nac အတွက်အစာရှောင်ခြင်း DA တိုးမှုကြောင့် hypothesize ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့အပေါ်မှာနှင့် DA အချက်ပြမှုများ၏တိုးမြှင့်သည့် PFC ပိတ်ထားရသောစိတ်ခွန်အားနိုး / drive ကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်တစ်ခုသက်ဆိုင်ရာ overactivation, (prefrontal တားစီးပြင်းထန်သော amygdala activation နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်) တွင်ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း intoxication , အစိတ်ခွန်အားနိုး / drive ကို circuit ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ PFC ၏တန်ခိုးပိတ်ဆို့ခြင်း။ ဒီ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုမရှိရင်, တစ်ဦးအပြုသဘော-တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်ရလဒ်များအရာ, တည်တတ်၏။ ယင်းဆားကစ်များအကြားအပြန်အလှန် bidirectional ကြောင့်မူးယစ်စဉ်အတွင်းကွန်ယက်၏ activation နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုရန်အေးစက်၏ saliency တန်ဖိုးကိုခိုင်မာစေရန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
, စွဲလမ်းအတွင်းမှတ်ဉာဏ် circuit ကို drives တွေကိုဆုလာဘ်မျှော်လင့်အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုများ၏တိုးမြှင့်တန်ဖိုးနှင့်တစ်ဦးပြီးသားအလုပ်မဖြစ် PFC နေဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဆိုပါ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွှား, မူးယစ်ဆေးစားသုံးဖို့လှုံ့ဆျောမှုပိုကောင်းစေပါတယ်: အတိုတှငျကြှနျုပျတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းစွဲလမ်းများအတွက်အကောင့်တစ်ခုမော်ဒယ်တင်ပြသည်။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် DA တိုးသိသိသာသာမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များအတွက် attenuated သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacological သက်ရောက်မှုသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်အေးစက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာနောက်ထပ်ကြောင့်အဆက်ဖြုတ်၏ယခု unopposed မူးယစ်ဆေးယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုကားမောင်းပြီးအပြုသဘော-တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်မျက်နှာသာ အဆိုပါ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, စွဲလည်းစိတ်ဓါတ်များနှင့် (မီးခိုးရောင်၏မဲမှောင်ရိပ်ကကိုယ်စားပြု) သတိအသိအမြင် instantiate သောဆားကစ် recalibrate ဖွယ်ရှိသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 8B) စမ်းသပ် corroborated လျှင်နောက်ထပ်ဝေး inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကနေချိန်ခွင်လျှာစောင်းနှင့်တဏှာနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဆီသို့ဦးတည်မယ်လို့နည်းလမ်းတွေပါ။
ကျနော်တို့အလွယ်တကူဒီရိုးရှင်းတဲ့မော်ဒယ်ကြောင်းဝန်ခံ: ငါတို့သည်တဦးတည်းဒေသအများအပြားဆားကစ်အထောက်အကူပြုနှင့်အခြားဆားကစ်ကိုလည်းစွဲလမ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့များပါတယ်အကြောင်း, အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်လည်းထိုအ circuits များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ဖြစ်သည်သဘောပေါက်။ ဒီ model DA အပေါ်အလေးပေးသော်လည်းအပြင်, က glutamatergic စီမံကိန်းများတွင်ပြုပြင်မွမ်းမံစွဲလေ့လာသည့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အများအပြားဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ကဒီမှာဆွေးနွေးတင်ပြကြောင်းကို preclinical လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထင်ရှား၏။ တခြား neurotransmitters cannabinoids နှင့် opioids အပါအဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု preclinical လေ့လာမှုများအနေဖြင့်လည်းထင်ရှားပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲမကြာသေးမီကတိုင်အောင်, PET ပုံရိပ်များအတွက် Radio-tracers ဖို့ကန့်သတ် access ကိုမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နှင့်စွဲအခြား neurotransmitters များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့စွမ်းရည်ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။
dopamine အမျိုးအစား2/3အဲဒီ receptor
hypothalamic pituitary ဝင်ရိုး
positron ထုတ်လွှတ် tomography
1. Zink CF, Pagnoni, G, Martin ME, et al ။ အဓိက nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ striatal တုံ့ပြန်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 8092-7 ။ [PubMed]
2. Horvitz JC ။ အဓိက non- ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များ Mesolimbocortical နှင့် nigrostriatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ neuroscience ။ 2000;96: 651-6 ။ [PubMed]
et al 3. Tobler PN, O'Doherty JP, Dolan RJ ။ လူ့ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက်စွန့်စားမှုသဘောထားနှင့်ဆက်စပ်သောမသေချာမရေရာနိုင်တဲ့ coding ကနေကွဲပြား Reward တန်ဖိုးကို coding ။ J ကို Neurophysiol ။ 2007;97: 1621-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR ။ မျောက် orbitofrontal cortex နှင့် Basal ganglia အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချ။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 272-84 ။ [PubMed]
et al 5. Volkow ND, ဝမ် GJ, Ma Y ကို။ မျှော်လင့်ခြင်းသည်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့်ကိုကင်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအားစိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 11461-8 ။ [PubMed]
6. Koob GF, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ။ 1988;242: 715-23 ။ [PubMed]
7 ။ di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1988;85: 5274-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8. Villemagne VL, Wong DF, Yokoi F, et al ။ [(12909) C] ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် GBR11 amphetamine- သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန် attenuates စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည် PET Scan ဖတ် raclopride ။ synapses ။ 1999;33: 268-73 ။ [PubMed]
၉ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ယင်း၏ကုသမှု - အာရုံကြောသိပ္ပံပညာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာ Nexus ။ ခုနှစ်တွင်: ဂျွန်ဆင် BA, Dworkin SI, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏ Neurobiological အခြေခံ။ Lippincott-Raven; Philadelphia တွင်: 1997 ။
10. Brody AL, Mandelkern MA, Olmstead RE, et al ။ ပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် denicotinized စီးကရက်သောက်ခြင်းကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် Ventral striatal dopamine ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34: 282-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11. Boileau I, Assaad JM, Pihl RO, et al ။ အရက်သည်လူ့နျူကလိယ accumbens တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ synapses ။ 2003;49: 226-31 ။ [PubMed]
12 ။ Drevets WC, Gautier ကို C, စျေး JC, et al ။ လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;49: 81-96 ။ [PubMed]
et al 13. Volkow ND, ဝမ် GJ, Fowler JS ။ psychostimulant- သွေးဆောင် "မြင့်" နှင့် dopamine Transporter ထေိုအကြားဆက်ဆံရေး။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1996;93: 10388-92 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 14. Volkow ND, ဝမ် GJ, Fowler JS ။ လူသားများတွင် psychostimulants ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု ဦး နှောက် dopamine နှင့် D (2) receptors ၏ထေိုနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999;291: 409-15 ။ [PubMed]
et al 15. Volkow ND, ဝမ် GJ, Fowler JS ။ ပါးစပ် methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများအားဖြင့်သွေးဆောင်လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ Dopamine Transporter နေရာချထား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;155: 1325-31 ။ [PubMed]
16. Chait LD ။ လူသားများအတွက် methylphenidate ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလဒိeffects္ effects အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1994;5: 281-8 ။ [PubMed]
et al 17. Volkow ND, Wang, G, မုဆိုး JS ။ ခံတွင်း methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများသည်လူ့ ဦး နှောက်ထဲတွင် extracellular dopamine ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: RC121 ။ [PubMed]
18. Stoops WW, Vansickel AR, Lile JA ။ Acute d-amphetamine ကြိုတင်ကုသမှုသည်လူတို့၏စိတ်ကြွဆေးကိုမိမိဘာသာအုပ်ချုပ်မှုကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007;87: 20-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 19. Parasrampuria DA, Schoedel KA, Schuller R ကို။ pharmacokinetics နှင့် pharmacodynamic သက်ရောက်မှုများ၏အကဲဖြတ်လူသားတစ် ဦး ထူးခြားတဲ့ပါးစပ် osmotic -controlled တိုးချဲ့ - လွှတ်ပေးရန် methylphenidate ရေးဆွဲရေး၏အလားအလာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော။ J ကို Clin Pharmacol ။ 2007;47: 1476-88 ။ [PubMed]
20. Balster RL, Schuster CR ။ ကိုကိုအားဖြည့်၏ Fixed- ကြားကာလအချိန်ဇယား: ထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပြုတ်ရည်ကြာချိန်။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1973;20: 119-29 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21. Volkow ND, ဝမ် GJ, Fischman MW, et al ။ လူ့ ဦး နှောက်အတွင်းကိုကိုင်းသွေးဆောင် dopamine Transporter ပိတ်ဆို့ခြင်းအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2000;67: 1507-15 ။ [PubMed]
et al 22. Volkow ND, Ding YS, မုဆိုး JS ။ methylphenidate သည်ကိုကင်းကဲ့သို့လား? လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ pharmacokinetics နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်လေ့လာရေး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;52: 456-63 ။ [PubMed]
23. Zweifel LS, Parker JG, Lobb CJ, et al ။ dopamine အာရုံခံများက NMDAR- မှီခိုပေါကျကှဲပစ်ခတ်မှု၏နှောင့်အယှက် phasic dopamine- မှီခိုအပြုအမူ၏ရွေးချယ်အကဲဖြတ်ပေးသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2009;106: 7281-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 24. Lane DA, Lessard AA၊ Chan J ။ စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် ventral tegmental inရိယာ၌ AMPA အဲဒီ receptor GluR1 subunit ၏ subcellular ဖြန့်ဖြူးအတွက်ဒေသ - တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများကို။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 9670-81 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 25. Dong Y, Saal: D, သောမတ်စ် M က။ dopamine အာရုံခံအတွက် Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏ကိုကာကိုလာ potentiation: GluRA အတွက်အပြုအမူဆက်စပ်မှု (- / -) ကြွက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2004;101: 14282-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26. Kauer ဂျေအေ, Malenka RC ။ Synaptic ပလပ်စတစ်နှင့်စွဲ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007;8: 844-58 ။ [PubMed]
27. Di Chiara, G, Bassareo V, Fenu S၊ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း။ Neuropharmacology ။ 2004;47: 227-41 ။ [PubMed]
et al 28. Volkow ND, ဝမ် GJ, Fowler JS ။ detoxified ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်သူများ၏ ဦး နှောက်တွင်ကိုကင်းပမာဏကိုလျှော့ချသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 1996;14: 159-68 ။ [PubMed]
et al 29. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ ။ dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုလျော့ကျခြင်းသည်ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားပြုသူများတွင်တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ synapses ။ 1993;14: 169-77 ။ [PubMed]
et al 30. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္,, တိုကျရိုကျ cortex နှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2002;78: 610-24 ။ [PubMed]
31. Thanos PK, Michaelides M, Umegaki H၊ နျူကလိယသို့ D2R DNA လွှဲပြောင်းမှုသည်ကြောင်များတွင်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ synapses ။ 2008;62: 481-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32. Thanos PK, Taintor NB, Rivera SN, et al ။ DRD2 ဗီဇပြောင်းခြင်းကိုနျူကလိယသို့ပြောင်းလိုက်ခြင်းသည်အရက်၏အဓိကရင်းမြစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004;28: 720-8 ။ [PubMed]
et al 33. Lee B, London ED, Poldrack RA ။ striatal dopamine d2 / d3 receptor ရရှိနိုင်မှုကိုမက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခိုမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 14734-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 34. Volkow ND, Wang GJ, Telang F ။ detoxified အရက်သမားများတွင် striatum အတွက် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်း: ဖြစ်နိုင်သော orbito-frontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 12700-6 ။ [PubMed]
35. Kalivas PW ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းအတွက်အချိုမှုစနစ်များ။ Curr Opin Pharmacol ။ 2004;4: 23-9 ။ [PubMed]
et al 36. Dalley JW, Fryer TD, Brichard L ကို။ Nucleus accumbens D2 /3receptors သည်အလိုလိုက်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းတို့ကိုခန့်မှန်းသည်။ သိပ္ပံ။ 2007;315: 1267-70 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 37 Belin: D, Mar AC, Dalley JW ။ မြင့်မားသော impulsivity သည် compulsive cocaine သောက်ခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုခန့်မှန်းသည်။ သိပ္ပံ။ 2008;320: 1352-5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 38 Volkow ND, Chang L, Wang GJ ။ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ dopamine Transporter လျှော့ချရေးအသင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 377-82 ။ [PubMed]
et al 39. Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများအတွက်မှန်ကန်သော striato-orbitofrontal ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ methylphenidate- သွေးဆောင်တပ်မက်ခြင်းအစည်းအရုံး: စွဲတွင်သက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;156: 19-26 ။ [PubMed]
et al 40 Volkow ND, Wang GJ, Begleiter H ။ dopamine D2 receptors မြင့်မားသောအဆင့်များသည်ထိရောက်မှုမရှိသောအရက်မိသားစုဝင်များ - ဖြစ်နိုင်သောအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;63: 999-1008 ။ [PubMed]
41. Waelti P, Dickinson A, Schultz W. Dopamine တုန့်ပြန်မှုများသည်ပုံမှန်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေခံယူဆချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သဘာဝ။ 2001;412: 43-8 ။ [PubMed]
၄၂။ မက်ခလူယာအမ်၊ ဒေါဒီ၊ မွန်တဂရီ PR ။ မက်လုံးပေး salience များအတွက်ကွန်ပျူတာအလွှာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003;26: 423-8 ။ [PubMed]
43. Phillips PE, Stuber GD, Heien ML ။ Subsecond dopamine ဖြန့်ချိခြင်းသည်ကိုကင်းရှာခြင်းကိုအားပေးသည်။ သဘာဝ။ 2003;422: 614-8 ။ [PubMed]
et al 44 Volkow ND, Wang GJ, Telang F ။ dorsal striatum ရှိကိုကိုးများနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲလမ်းနေသောတွန်းအား၏ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 6583-8 ။ [PubMed]
45. Wong DF, Kuwabara H, Schretlen DJ, et al ။ cue- ရူးနှမ်းကင်းကင်းတဏှာအတွင်းလူ့ striatum အတွက် dopamine receptors ၏တိုးလာထေို။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31: 2716-27 ။ [PubMed]
et al 46. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏သိမှုထိန်းချုပ်မှုသည်ကိုကင်းကျူးလွန်သူများတွင် ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတားဆီးပေးသည်။ Neuroimage ။ 2010;49: 2536-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ ။ အဆိုပါစွဲလူ့ ဦး နှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Clin Invest ။ 2003;111: 1444-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 Koob GF ။ စွဲ၏မှောင်မိုက်ဘက်၌ CRF နှင့် CRF-related peptides ၏အခန်းကဏ္.ကို။ ဦးနှောက် Res ။ 2010;1314: 3-14 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49. Goldstein RZ, Craig အေဒီ၊ Bechara A, et al ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ neurocircuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2009;13: 372-80 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ comorbidity များအတွက်အလွှာအဖြစ် cortical-limbic အပြန်အလှန်၏ပြတ်တောက်။ Neurotox Res ။ 2006;10: 93-101 ။ [PubMed]
et al 51. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏သိမှုထိန်းချုပ်မှုသည်ကိုကင်းကျူးလွန်သူများတွင် ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတားဆီးပေးသည်။ Neuroimage ။ 2010;49: 2536-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စိတ်ကျရောဂါ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်သွေးဆောင်အခွအေနေအဖြစ် 52 Barr လေး, Markou အေ Psychostimulant ဆုတ်ခွာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2005;29: 675-706 ။ [PubMed]
53. Di Chiara G. Dopamine အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအပြုအမူများအနှောင့်အယှက်ပေးမှုများတွင် - homology ၏ဖြစ်ရပ်လား။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005;86: 9-10 ။ [PubMed]
54. Kenny PJ, Markou အေ။ နီကိုတင်းဓာတ်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းသည် ဦး နှောက်ဆုချခြင်းစနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုများစွာကျဆင်းစေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 6208-12 ။ [PubMed]
et al 55. Fowler JS, Volkow ND, Logan J ။ လူ့ ဦး နှောက်တွင်မက်သာဖီတမင်း၏လျင်မြန်စွာစားသုံးမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုရှိခြင်းကိုကင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Neuroimage ။ 2008;43: 756-63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed